सांसद पद त्यागे अब राजतन्त्रको लागि संघर्ष गर्छु : भिम रावल – jagritikhabar.com
सांसद पद त्यागे अब राजतन्त्रको लागि संघर्ष गर्छु : भिम रावल
संसद पद त्याग्नुभयो सल्युट ! भिम रावल ज्यु अब सडकमा आउनुस राजा ल्याएर मुलुक जोगाउन हातेमालो गरौं। नेपालमा राजा सहितको सैनिक शासन नआए देश विकाश नहुने भयो : भिम रावलले प्रस्ट आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ
देशभक्त हुनु नै राजा ज्ञानेन्द्र शाहको लागी अभिशाप ठहर भयो । देशभक्त भएको कारण नै राजा ज्ञानेन्द्र शाह सत्ता बाट बहिर्गमन हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्ने कुरा मैले बारम्बार भनी रहेको छु । यसकारण देशभक्त हुनु नै राजा ज्ञानेन्द्र शाहको लागी ठुलो गल्ती र महाभुल थियो ।
श्री ५ महेन्द्र शाह र श्री ५ बिरेन्द्र शाह वंश मारिए किन र मदन भण्डारी र जीवराज आस्रित मारिए किन ? यी सबै घटनाक्रम हरुलाई राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नजीकबाट नियालेर मनन गर्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने हो । राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले मुलुक संग विश्वासघात र मुलुकको अहितमा काम गरेपनि भएको छ विश्वासघात गर्नेहरुको पछि नै नागरिकहरु लागेका छन र जयजयकार गरेका छन । ताली दुई हातले बज्छ एक हातले बज्दैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । यसकारण राजा ज्ञानेन्द्र शाह परिवार मात्र देशभक्त भएर संभव छ ?राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ताली दुई हातले बज्छ एक हातले बज्दैन भन्ने कुरा बुझ्न सक्नु भएन ।
नेपाल मुलुक त सबैको हो मुलुकको माया सबैलाई लाग्नुपर्ने हो । तर देशप्रति माया, मोह र वफादारीता नेताहरू र नेताहरूको पछि लाग्ने जनताहरु कसैमा देखिएन । नेताहरूले दुधको रंग कालो हुन्छ भने जनताहरु पनि दुधको रंग कालो हुन्छ नै भन्छन तर जनताहरुले दुधको रंग सेतो छ भनेर भन्न सक्दैनन नेपाली जनताहरुमा खराबीपन नै यही छ नेपाली जनताहरु अवसरवादी छन क्षणिक स्वार्थ मात्र हेर्दछन ।
के.पी. शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्प कमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरुले राष्ट्रघाती सन्धि र सम्झौताहरु गर्दा पनि जनताहरुले नेताहरूको सराहना गरेका छन । म भन्छु राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मात्र देशभक्त हुनुपरेको किन ? राजा ज्ञानेन्द्र शाह मात्र देशभक्त भएर संभव छैन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मनन गर्नुपर्ने हो । राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अब आफू देशभक्त नभई आफु र आफ्नो परिवारको हित र भलो कसरी हुन्छ हेर्नुपर्ने समय आएको छ ।